ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရှိငှါးရနျအိမျခွံမွမြေား | iMyanmarHouse.com
ရနျကငျး -အဆငျ့မွငျ့ကံဘဲ့တာဝါ ကှနျဒို ငှားမညျ -နရောကောငျး ပတျဝနျးကငျြကောငျးတယျ -
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19163853 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19129380 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Asia House Real Estate ပိတ်ရန်
🎊 အရှဒေ့ဂုံစကျမူ့ဇုနျ🎊 ပစ်စညျးထားဂိုဒေါငျဌားမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19163614 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165616 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
28ရပျကှကျ ပွညျထောငျစုလမျးမကြောကပျ လုံးခငျြးအိမျ ငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165356 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇹🇼 တ/ဒဂုံစကျမူ့ဇုနျ🇹🇼 စကျရုံ/ပစ်စညျးထားဂိုဒေါငျဌားမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19163681 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
♦ သာကတေ ရှပေုဇှနျအနီး..အဆောကျဦးအသဈ(76×120). .ငှားမညျ..ပစ်စညျးထားရနျကောငျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19162268 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အာရှမွေ အိမျခွံမွေ အကြိုးဆောငျ ကုမ်ပဏီ(ဦးခဈြမောငျရုံး) 01-401167/ 01-401168/ 09-5041674 ပိတ်ရန်
ကုနျးဘောငျအိမျယာ (40*60) တဈထပျတိုကျအသဈ Master(1)single(1) တလ(3)သိနျးခှဲ -တိုကျခနျးတနေဲ့ မှနျးကွပျလို့ -ကိုယျအဝနျးဝိုငျးလေးနဲ့ သီးသနျ့နခေငျြတယျဆိုလာပါ -...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19161782 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အဆငျသငျ့နထေိုငျရနျကောငျးသော လုံခွုံမူ့အပွညျ့နဲ့ နလေို့ရမညျကှနျဒို တစိမျးအဝငျထှကျမရှိ -ကိုယျ့အဝနျးဝိုငျးနဲ့ကိုယျ -carparking -swimming pool- security -master(1)single(1) livingroom - လေးထောငျ့ကနျလမျး ဇဝန အနီး...
5.50 သိနျး (ကပျြ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19160926 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုငျမွို့နယျ၊ Market Place အနီးတှငျလုံးခငျြးအိမျငှားမညျ။
80 သိနျး (ကပျြ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165642 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165760 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
$ 2,000 (အမရေိကနျဒျေါလာ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165741 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165724 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရတနာနှငျးဆီအဆငျ့မွငျ့အိမျရာ 600sqft2Bed Rooms Unit
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165683 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165661 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165660 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165601 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှမျးထကျ အိမျခွံမွေ အကြိုးဆောငျလုပျငနျး ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19165582 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်